MIM ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူ |Jiehuang
အမျိုးအစား- သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ
ပစ္စည်း- သတ္တု၊ သံမဏိ 17-4ph
မူလနေရာ- Ningbo၊ တရုတ်နိုင်ငံ မော်ဒယ်နံပါတ်- Mini/Standard
ပါဝါအရင်းအမြစ်- တစ်ခုမှ အာမခံချက်- ၃ နှစ်
ရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု- အွန်လိုင်းနည်းပညာပံ့ပိုးမှု ပစ္စည်း- သတ္တု၊ Stainless steel 316L
စင်သက်တမ်း- ၁ နှစ် အရည်အသွေး အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်- ce
တူရိယာ အမျိုးအစား ခွဲခြားခြင်း- အတန်း I ဘေးကင်းရေးစံနှုန်း- တစ်ခုမှ
ထုတ်ကုန်အမည်: Metalicos Ortodoncia ကွင်းပိတ် အရောင်- ငွေ
အရွယ်အစား မီနီ/စံ ထုပ်ပိုးမှု- စိတ်ကြိုက်
အပေါက်- ၀.၀၂၂/၀.၀၁၈ ချိတ်:3ချိတ်;345 ချိတ်;ချိတ်မရှိပါ။
အမျိုးအစား- Edgewise/roth/mbt အမျိုးအစား- သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများ
သတ္တုဆေးထိုးခြင်း MIM နည်းပညာသည် ထုတ်ကုန်၏ တိကျမှုကို ခံနိုင်ရည် အပေါင်း-အနုတ် 0.03~0.05mm ဖြင့် သေချာစေသည်။
2. Excellent အရည်အသွေး
ပြောင်လက်သောပုံစံသည် လူနာကို ဝတ်ရအဆင်ပြေစေပြီး သန့်ရှင်းရလွယ်ကူစေသည်။Self-ligating cover sheet သည် ပိုကြံ့ခိုင်ပြီး ပုံပျက်လွယ်သည်။
Angle of bracket ကို လူနာတစ်ဦးစီ၏ အခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။သွားတစ်ချောင်းချင်းစီရဲ့ သွားတိုက်နည်းကို ကွန်ပြူတာနဲ့ ပုံဖော်ပေးပါလိမ့်မယ်။
4. အကောင်းဆုံး ဒီဇိုင်း
အဆင်ပြေပြီး ပြုပြင်ရန် လွယ်ကူသည်။
သမားရိုးကျ သွားတိုက်နည်း နည်းပညာနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက၊ စတီးဝါယာကြိုး သို့မဟုတ် ရာဘာ၏ ချည်နှောင်မှုကို ဖယ်ရှားပေးကာ သံမဏိဝိုင်ယာကြိုးများနှင့် ကွင်းကွင်းများကြား ပွတ်တိုက်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး ကုသမှုအချိန်ကို ထိရောက်စွာ တိုစေသည့် အပိုပိတ်ဆို့သည့် ကိရိယာတစ်ခုရှိသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Customer များ
၎င်းသည် မှတ်ပုံတင်ထားသော အရင်းအနှီး ယွမ် ၃၃.၅ သန်းရှိပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်သည်။သတ္တုဆေးထိုးခြင်း(MIM) နည်းပညာဖြေရှင်းချက်။ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၊ R&D၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် အရောင်းတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော နည်းပညာမြင့် လုပ်ငန်းတစ်ခု။ကုမ္ပဏီ၏ မူပိုင်နည်းပညာသည် နိုင်ငံတော်မှ လက်ရှိပံ့ပိုးပေးနေသည့် ပစ္စည်းများအသစ်နှင့် တန်ဖိုးကြီးစက်ပစ္စည်းနယ်ပယ်များမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။နည်းပညာကို လူသုံး အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ကိရိယာများ၊ အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများနှင့် iND ကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များစွာတွင် ဖြန့်ကျက်နိုင်သည်။စက်မှုအပိုင်း။
10 နှစ်ကျော်ကြာ လည်ပတ်ပြီး နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် နက်ရှိုင်းစွာ စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် ကုမ္ပဏီတွင် လုပ်သား 50+ ကျော်ရှိပြီး နှစ်စဉ် ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် 75 သန်းကျော်ဖြင့် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း 15 ခုရှိသည်။ကုမ္ပဏီသည် ISO9001 အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ ISO14001 ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် OHSAS18001 လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်တို့ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးဖြစ်သည်။ကုမ္ပဏီ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွင် တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့် ၁၄ ခု၊ အသုံးဝင်မှု မော်ဒယ်မူပိုင်ခွင့် ၁၃ ခု၊ သိပ္ပံနည်းကျနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ အောင်မြင်မှုများ ၃ ခု၊ မြူနီစီပယ်အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး ထုတ်ကုန် ၂ ခုနှင့် MIM အဓိက ဘုံနည်းပညာ သုတေသနရလဒ် 30 ကျော်တို့ကို ရရှိထားပြီး ၎င်းတို့အားလုံးသည် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုတွင် အောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။
ယခင်- ကားအပိုပစ္စည်းအတွက် Sintering အပိုင်း
နောက်တစ်ခု: MIM ကို သတ္တုထိုးသွင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Scalpel
ကားအပိုပစ္စည်းအတွက် Sintering အပိုင်း
316l အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ သတ္တုထိုးထည့်ခြင်း